HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Cebuano Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
Ny roa amin’ireo trano telo an’ny Vavolombelon’i Jehovah, izay simba be.
Niditra an-tanety tao Samar ny Rivo-doza Usman, tamin’ny 29 Desambra 2018. Io no nosy fahatelo lehibe indrindra any Philippines. Avy be ny orana ka nisy tany nihotsaka sy ranotrambo. Olona 25, fara fahakeliny, no maty ary 42 no naratra. Trano 22 835 kosa no simba.
Nilaza ny sampan’i Philippines fa tsy nisy rahalahy na anabavy maty tamin’ilay loza. Trano telo an’ny mpiara-manompo kosa no rava ary efatra no simba. Nisy simba koa tamin’ny Efitrano Fanjakana iray. Nanaraka ny toromariky ny sampana ny Komitin’ny Vonjy Rano Vaky ary nanome fanampiana sy trano vonjimaika ho an’ny fianakaviana tra-boina.
Azontsika antoka hoe mitoky amin’i Jehovah foana ireny rahalahy sy anabavintsika tratran’ny loza ireny, satria fantany fa hampahery sy hanatanjaka azy i Jehovah.—1 Petera 5:10.
Bolivia: Nanimba Zavatra Be ny Tany Nihotsaka tao La Paz